China Prefilled Syringe Machine (inosanganisira mushonga) vagadziri uye vanotengesa | IVEN
Yakagadziridzwa Syringe Production Line - PFS
Prefilled syringe imhando nyowani yekurongedza zvinodhaka zvakagadzirwa muma1990. Mushure memakore anopfuura makumi matatu ekuzivikanwa uye kushandiswa, yakaita basa rakanaka mukudzivirira kupararira kwezvirwere zvinotapukira uye kusimudzira kwekurapwa. Masirinji akazadzikiswa anonyanya kushandiswa kuputira uye kuchengetedza kwemadhigirii epamusoro uye anoshandiswa zvakananga kujekiseni kana kuvhiya ophthalmology, otology, orthopedics, nezvimwe.
Ndeipi Syringe yakasarudzwa?
Parizvino, chizvarwa chekutanga chese girazi jekiseni rave kushomeka kushandiswa. Chizvarwa chechipiri chinoraswa chena epurasitiki sirinji inoshandiswa zvakanyanya pasi. Kunyangwe iine zvakwakanakira zvemutengo wakaderera uye nyore kushandisa, ine zvakare iine zvirema zvayo, senge acid uye alkali kuramba, kudzokororazve uye kusvibiswa kwezvakatipoteredza. Naizvozvo, nyika dzakasimukira nematunhu zvakasimudzira zvishoma nezvishoma kushandiswa kwechizvarwa chechitatu chemasirinji azere. Rudzi rweiyo pre-yekuzadza sirinji ine mabasa ekuchengetedza mishonga uye yakajairika jekiseni panguva imwe chete, uye inoshandisa izvo zvinhu zvine hukama hwakanaka uye kugadzikana. Izvo hazvisi chete zvakachengeteka uye zvakavimbika, asi zvakare zvinoderedza basa uye mutengo kubva mukugadzira kuti ushandise kusvika pamwero mukuru uchienzaniswa neyechinyakare "mushonga bhodhoro + sirinji", iyo inounza mikana yakawanda kumakambani emishonga uye kushandiswa kwemakiriniki. Parizvino, mabhizinesi emishonga anowedzera uye akawedzera uye akaisa muitiro wekurapa. Mumakore mashoma anotevera, ichave iri yekupakata nzira yemishonga, uye zvishoma nezvishoma kutsiva chinzvimbo chemazhinji majekiseni.
Chii chinonzi Prefilled Syringe Hunhu?
Semhando nyowani yekurongedza zvinodhaka, sirinji yakasarudzika inozivikanwa ne:
(1) Uchishandisa yepamusoro girazi uye rabha zvinoriumba, izvo zvine kugarisana zvakanaka zvinodhaka uye anogona nechokwadi kugadzikana mumapepa zvinodhaka;
(2) Kuderedza marara anokonzerwa nekushambadzira kwemishonga panguva yekuchengetedza uye kuendesa, kunyanya kune anodhura emakemikari kugadzirira;
(3) Kudzivisa kudzokororwa kwakadzokororwa mushure mekushandisa zvinodzikisira uye kudzikisira mukana wechipiri kusvibiswa;
(5) Inoratidza zita remushonga zvakanangana nemudziyo wejekiseni, izvo zvisiri nyore kuita kiriniki; Kana iwo mavara ari nyore kubvisa, zvinobatsirawo kuchengetedza ruzivo rwekushandisa zvinodhaka mune varwere.
(6) Zviri nyore kushanda uye kuponesa hafu yenguva mukiriniki pane kushandisa ampoules, iyo inonyanya kukodzera kune varwere vechimbichimbi.
Ndeapi marongero ekushandisa kweiyo Prefilled Syringe?
(1) jekiseni kushandiswa: tora iyo yakasarudzika sirinji inopihwa nemishonga emakambani, bvisa kurongedza uye jekiseni zvakananga. Iyo jekiseni nzira yakafanana neyakajairika sirinji.
(2) Mushure mekubvisa kurongedza, inoenderana yekutsvaira tsono yakaiswa pamusoro wekoni musoro, uye kuwacha mukuvhiya kushanda kunogona kuitwa.
Kune mhando dzakasiyana dzemakemikari esiringi akasarudzika kubva kuIVEN Pharmatech, iwo akasarudzwa masinji esirinji anoonekwa neyakagadzirwa nzira uye kugona.
Yakagadzirirwa syringe yekudyisa usati wazadza inogona kuitwa neyese otomatiki nzira uye nemaoko nzira.
Mushure meiyo siringi yakasarudzwa inopinzwa mumushini, iri kuzadza nekuisa chisimbiso, ipapo iyo sirinji yakafambiswa zvakare inogona kuve yakajeka kuongororwa uye kunyorerwa pamhepo, iko iko kuteedzera kwekukurumidza kuchiteverwa. Kusvika ikozvino sirinji yakasarudzwa inogona kuendeswa mukuita mbichana uye blister kurongedza muchina uye muchina wekutakura kuti uwedzere kurongedza.
Iko kugona kukuru kwesiringi yakasarudzika ndeye 300pcs / hr uye 3000pcs / hr.
Mushini wesirinji wakasarudzika unogona kuburitsa sirinji yakawanda se0.5ml / 1ml / 2ml / 3ml / 5ml / 10ml / 20ml nezvimwe.
Nhanganyaya yezvakanakira chigadzirwa
Iyo yakasarudzika sirinji muchina inoenderana kune akafanotaurwa majekiseni, uye zvese zvigadzirwa zvakagadzirwa. Iyo yakagadzirirwa neGerman yepakutanga yakakwira chaiyo mutsara wechitima uye isina gadziriso. Inotungamirwa ne2 seti yeservo motors yakaitwa neJapan YASUKAWA.
Vharira plugging, uchidzivirira zvidimbu zvidiki kubva mukukwesana kana vibrator ichishandiswa kumisa mabhaira. Kuchenesa kunochinja nenzira isina nhano.
Dhinda-kunze kwemaitiro parameter, yekutanga data inochengetwa.
Zvese zvikamu zvekubatana zvinhu ndeye AISI 316L uye mishonga yesilicon rabha.
Kubata skrini kuratidza zvese zvinoshanda chinosanganisira chaiyo nguva yekuzorora kumanikidza, nitrogen kumanikidza, mweya kumanikidza, mitauro yakawanda inowanikwa.
AISI 316L kana yakakwira chaiyo ceramic kutenderera pombi dzemapombi dzinoendeswa ne servo motors. Ingo seta-up pane inobata skrini yekugadzirisa chaiyo otomatiki. Pombi yega yega yepisitoni inogona kugadzirirwa pasina chishandiso.
Kuzadza Vhoriyamu 0.5ml, 1ml, 1-3ml, 5ml, 10ml, 20ml
Nhamba Yekuzadza Musoro 10 Sets
Kukwanisa 2,400-6,00 Sirinji / Hora
Y Kufamba Kure 300 mamirimita
Kumanikidzwa Mhepo 6kg / cm2, 0.15m3 / min
Divi 1400 (L) x1000 (W) x2200mm (H)
Pashure: Girazi Bhodhoro IV Solution Kugadzira Line
Zvadaro: 30ml girazi Bhodhoro Sirasi Kuzadza uye Capping Machine yeMishonga
30ml girazi Bhodhoro Sirasi Kuzadza uye Capping Mac ...
Herb Extraction Mukudhinda Line (Artemisinin ex ...
Ampoule Machine À Coudre Singer, Yakagadzirirwa-Syringe Machine, Ampoule Machine À Coudre Bernina, Disposable Syringe & Tsono Production Line, Pre Yakazadza Syringe Kuzadza Machine, Ampoule Muchina À Coudre Led,